Imibono yabantwana kunye neyokuSebenza yeNdawo yokulala kwigumbi lokulala-igumbi labantwana
UkuNwaba kunye nokuSebenza kwabaNtu kwiNdawo yokuHlala kwiMibono / kwiNgcebiso ezi-5 zokukuNceda ukuHombisa igumbi lokulala likaGqirha wakho
Isilimela 29, 2017 by USomali uHelen, Iimbono zizonke:
Igumbi lokulala labantwana lelona gumbi elinemisebenzi emininzi ekhayeni lakho. Yindawo apho abantwana baya kudlala khona, bafundisise, balale, bameme abahlobo kunye nokuba ixesha liphumile. Bachitha ixesha elininzi kumagumbi abo okulala. Xa uphinde wamkeleke kwigumbi lomntwana, qiniseka ukuba udala umoya ococekileyo kunye nobumnandi. Gcina imali kwizinto ezihonjisiweyo ezisebenza kwaye zikhuselekile. Izinto zokusebenza zikhuthaza umntwana wakho ukuba afunde kwaye akhulise iingcinga zabo. Nazi izimvo ezimbalwa malunga nendlela yokuhlobisa igumbi lomntwana wakho
Yahlula-hlula igumbi kwiiNdawo eziSebenzayo
Indawo yokufunda, indawo yokudlala, kunye nendawo enebhedi ekhululekile kufuneka yahlukaniswe ngokokubona. Oku kuyakuqinisekisa ukuba umntwana ugxila kwindawo enye ngaphandle kokuphazanyiswa yenye. Unakohlula le mimandla esebenzayo kunye nesahlukanisi segumbi okanye iishelfu ezisezantsi. Emva koko, ukuhlobisa isithuba ngasinye esisebenzayo kunye yoyilo eyahlukileyo. Beka isibane setafile yanamhlanje kwindawo yokufundisisa, kunye nokukhanya ebusuku kwizibane ze-LED zendawo yokulala. Indawo yokudlala kufuneka izaliswe yimibala eqaqambileyo kunye nezinto zokudlala zokuzonwabisa zabo.
Thatha ingqalelo iminyaka yomntwana, ubude, kunye nenqanaba lomsebenzi xa ukhetha ifanitshala yabo yokulala. Namhlanje, abaqulunqi befanitshala banikezela ngeendlela ezimangalisayo kunye nefenitshala esebenzayo. Idesika okanye ibhedi yokulala enesithuba esongeziweyo yokugcina indawo ayisiyombono nje yobuhle, kodwa ikwabonelela ngokugcinwa lula nangokule mihla. Iibhedi ziza ngeendlela ezahlukeneyo zokuyila ezinjengeenqanawa zepirate, iinqaba, okanye izindlu zemithi. Ukongeza, ezi bhedi zinikezela igumbi ngaloo ndlela zongeza ububanzi kwigumbi lomntwana.
Umbutho oGcinekileyo wokuLunga
Uninzi lwamagumbi abantwana lufana nendawo yentlekele eneemoto, oonodoli, iibhola, kunye ne-legos eziphothiweyo kumhlaba wonke zilinde ukuba ungene kuwo. Ukufumana abantwana ukuba bathathe iithoyi zabo emva kwexesha lokudlala lelinye ibali. Nangona kunjalo, iibhokisi zamathoyizi ezinemibala eyahlukeneyo kunye nabaququzeleli abanokuzonwabisa abanokubanceda bafumanise ukuba kumnandi emva kwayo yonke loo nto. Qinisekisa ukuba utyale imali yokugcina okusebenzayo okufumanekayo ngokulula kumntwana wakho ukuze asuse iithoyi zabo, ukuhambisa ngapha nangapha kwaye ngokukhawuleza kubabuyisele apho babekhona.
Landela umdla wabo xa uyihombisa
Abantwana baneempawu ezahlukeneyo abanomdla kuzo nabanomdla kuzo. Ukuba umntwana wakho mdala ngokwaneleyo, qinisekisa ukuba banegalelo kwinkqubo yoyilo. Fumanisa ukuba yintoni umntwana wakho ayithandayo; yiba Molweni Hello, iirobhothi, isibhakabhaka okanye ihlathi. Sebenza le nto kwithala lokulala lomntwana. Sebenzisa izimvo zabo ekukhetheni imibala efanelekileyo yegumbi labo. Qiniseka ukuba imibala inamandla kwaye imnandi. Ukuba awukho mkhulu ekuvuseleleni, iidola ezimbalwa zodonga kunye nokulala komntwana wakho, ngakumbi umthuthuzeli anele ukubeka umxholo. Le yindlela eqinisekileyo yokuvuyisa umntwana wakho.
Igumbi lokulala ekwabelwana ngalo
Kuba abantwana bakho babelana ngegumbi oko akuthethi ukuba kuya kufuneka utshatise yonke into ukusuka ku amashiti emiqalo abalaseleyo okanye ifenitshala. Uninzi lwabantwana bakhetha indawo yabo ukuba izaliswe ngesitayile sabo. Babandakanye xa bekuphinda kulungiselelwe igumbi ekwabelwana ngalo kwaye omnye makakhethe ubugcisa bakhe, indawo yokulala kunye nesibane ecaleni kwebhedi yabo. Akunyanzelekanga ukuba uthenge ibhedi entsha. Ungayipenda ngemibala eyahlukeneyo. Unokubeka umhlukanisi phakathi kweebhedi zabo, kwayepeyinta icala lomntu wonke kwigumbi lokulala ngemibala abayithandayo.
Kuyinto engenakuphikwa ukuba ubuntwana bukhawuleze. Njengomzali, qiniseka ukuba wenza okungcono kuneminyaka yabo yobuntwana. Igumbi labo lokulala yindawo efanelekileyo yokwenza oku. Nangona kunjalo, qinisekisa ukuba nayiphi na uyilo olukhethayo; banobomi obude kubo. Khetha imibala kunye nefenitshala eza kutshintsha nomntwana wakho njengoko bekhula.
Igumbi labo lokulala yindawo efanelekileyo yokwenza oku. Nangona kunjalo, qinisekisa ukuba nayiphi na uyilo olukhethayo; banobomi obude kubo.
USomali uHelen Juni 29, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Imibono yokuhlobisa igumbi lokulala, Igumbi lokulala labantwana, Igumbi lokulala labantwana, Imibono yokuhombisa, igumbi lokulala labantwana, Igumbi leNana. Bookmark le Permalink.
Oktobha 7, 2016 Igumbi lokulala eliphakamileyo elineDesika engaphantsi kwalo linceda abanini-ndlu abanesithuba esilinganiselweyo Ukwahluka ebhedini wakho oqhelekileyo omncinci nje emhlabeni, ibhedi yophahla yenzelwe ngokukodwa ukuba ibe phezulu. Ngomgangatho ukuba unyukele ukufikelela ngokulula ziyindlela elula kodwa elula yokufumana kakhulu kwisithuba sakho sobabini ngaphezulu nangaphantsi. Ngokokusebenza okuphezulu ziqhelekileyo zixhotywe edesikeni kwaye olu dibaniso lubenza balungele abantwana, ulutsha, kunye nabantu abadala. Gcina indawo enzulu Kukho iimeko ezininzi ezahlukeneyo apho indawo yokulala ephezulu enedesika […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Novemba 27, 2018 Ungawukhupha njani uxinzelelo kuLwakhiwo lokuqala lweKhaya Ukuthenga ikhaya lakho lokuqala lixesha elinomdla, kunokwenzeka ukuba unombono wokuba kuya kuba njani ukubuyela ekhaya kwindlu engeyoyakho yonke. Ukuba nomzi wakho kuvula iminyango emininzi kunokwenzeka xa kufika ixesha lokuhombisa, unokwenza nantoni na oyithandayo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokwaphula isivumelwano sokuqeshisa. Kwelinye icala, unendlu iphela yokubonelela ngesitayile kunye nesitayile, esinoxinzelelo. Nazi iingcebiso ezisibhozo ngendlela yokuhlobisa ikhaya lakho elitsha ngo-zero onobunzima. 1. […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Matshi 23, 2017 Iingcebiso ezi-5 eziSisiseko ekuKhanyiseni kweRomy kwiKhaya lakho Kusebusuku ngokuhlwa endlini yakho. Ekugqibeleni abantwana balala ezingubeni zabo, kwaye inja le ibalekayo. Nobabini ubeneveki enzima emsebenzini kwaye isidingo sexesha elisemgangathweni siyabonakala kubo bonke ukuba sibone. Ke wenza ntoni ukuseta imeko? Khanyisa amakhandlela anyanzelekileyo? Sebenzisa i-dimmer switch kwinto yakho enye kunye nokukhanya kuphela? Sonke siyaqonda ukuba ukukhanyiswa okuncitshisiweyo kunokonyusa imeko yothando-yinto yokuqala, ethathwe kwimbali yethu yomlilo wokukhanyisa […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Oktobha 19, 2018 Iingcebiso ze-5 zokudluliselwa kwekhaya ngokulula kunye noxinzelelo Ukutshintshela kwelinye ikhaya ukuya kwelinye lithuba elihle lokuba uqale ubomi obutsha. Kwangelo xesha, inkqubo yokuhamba usuka kwelinye iye kwelinye iya kuxinzeleka. Abantu abaninzi bafumanisa ukuba ukushukuma kuthatha uxinzelelo kunye nomzamo ukuze yonke into ihambe kakuhle ukusuka ekuqaleni kokuhamba de kube yimini yokugqibela. Ngethamsanqa, kukho iindlela zokwenza kube lula ukusuka kwelinye usiya kwelinye. Iingcebiso ezimbalwa ezilula zinokuqinisekisa ukuba wonke umntu […] exhonyiweyo Ukuqhubeka